Alloy efere Manufacturers & Suppliers - China Alloy efere Factory
Nkọwa ASTM B265 Titanium plate / Titanium mpempe akwụkwọ Ihe ọkwa 1: Titanium dị ọcha, dịtụ ala na ike ductility. Ọkwa 2: Titanium dị ọcha eji ọtụtụ. Ngwakọta kachasị mma nke ike, ductility na weldability. Ọkwa 3: Ike dị elu Titanium, nke ejiri maka Matrix-plate dị na shei na ndị na-agbanwe ọkụ ọkụ. Ọkwa 5: Ngwongwo titanium kachasị arụpụtara. Ike karịrị akarị. nnukwu okpomọkụ na-eguzogide. Ọkwa 7: Nlekọta nrụrụ dị elu karịa mbenata na mbenata gburugburu ...
Nickel Alloy Mpempe akwụkwọ / mpempe akwụkwọ 600 601 625 X-750 718 825
Aha aha Nickel Alloy Plate / mpempe akwụkwọ na-enweghị ihe ọ bụla 600 601 625 X-750 718 825 Ihe onwunwe Monel / Inconel / Hastelloy / Duplex Steel / PH Steel / Nickel Alloy Shape Round, Forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Spherical, Ribbon, Square, Ogwe, Pipe, Mpempe akwụkwọ ọkwa: 2205 (UNS S31803 / S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760 (Zeron 100), 2304,904L Ndị ọzọ: 253Ma, 254SMo, 654SMo, F50 (UNSS32100) F60, F61, F65,1J22, N4, N6 wdg Alloy: Alloy 20/28/31 Hastelloy: HastelloyB / -2 / B-3 / C22 / C-4 / S / C276 / C-2000 / G-3 ...